Tranonkala Take II
Alarobia, Oktobra 27, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Nick carter
Nifampiresaka tsara aho tamin'ity maraina ity Jeb avy amin'ny boaty kely. (Marina izany, nankafiziko izy. Raha tsy fantatrao hoe Jeb, taiza ianao?) Aza hadino mihitsy ny hoe nandidy indroa hitifitra aho, ary tsy afaka mitazona ny tanako amin'izao fotoana izao, Azoko antoka fa ho toy ny lalina tokoa ny zavatra nolazainy tamiko raha tsy avo ny kafe entin'ny kafe.
“Iza ary no mpanjifa kendrenao?” Nanontany aho, manantena ny handre momba ny indostria, ny habeny ary ireo mpamaritra momba ny akany hafa.
“Tranonkala faharoa an'ny orinasa izahay.” Hoy i Jeb tamiko. "Tsy maintsy nandalo an'ity dingana ity farafaharatsiny izy ireo taloha."
Faharoa? Te hanaraka ny rambon'ny palitao ve izy? Sa matoky tena fotsiny izy fa hanao tsaratsara kokoa, te hampamirapiratra ny fifaninanana. Samy tsy. Tiany fotsiny ny miara-miasa amin'ny mpividy mahira-tsaina. Mpanjifa iray izay mahalala izay tadiaviny, ny antony itiavany azy, ary izay tsy (ary tamin'ny fomba mahagaga) no niasa tamin'ny voalohany.
Voalohany indrindra, raha tsy manana tranokala ianao dia atsipazo ny iray. Zo an'i Jeb. Azonao atao ny mandany taona maro handinihana ny atiny, ny volavola, ny rafitry ny nav, ny teboka fiovam-po, sns. Ary ho be izany. Izy io dia mety hahomby amin'ny fandalinana tranga iray ho an'ny tetikasa zokiny ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversite. Fa aorian'ny 3 volana dia ho fantatrao fa diso ianao. Ankehitriny, mety ho diso ianao, na mety ho diso kely fotsiny ianao. Diso anefa ianao.
Aza manahy. Ny hoe diso no fomba haingana indrindra hahatongavana ho marina. Na ny manam-pahaizana momba ny famokarana, Robby Slaughter, mamporisika ny olona hanao tsy fahombiazana. Raha ny hevitr'i Jeb, raha vantany vao diso ianao - na dia somary diso aza - dia afaka miara-miasa aminao izy izao. Ankehitriny dia afaka manampy anao tokoa izy ary mametraka ny talentan'ny orinasany amin'ny asa fanompoana tsara indrindra ho anao.
Ankehitriny, ndao lazaina fa efa manana tranokala ianao. Miasa ve izany? Mandeha araka ny itiavanao azy ve izy io? Maninona raha averiko indray?
Matetika loatra, ny olona dia mitsabo tranonkala toy ny nitondrany antoka ara-barotra tamin'ny andro talohan'ny fanontana nomerika. Ataovy tonga lafatra aloha, satria lafo be ny mahazo "miakatra amin'ny loko" ka mila mihazakazaka 10k na mihoatra amin'ireo singa ireo ianao mba hanamarinana ny fandaniana. Ary avy eo, rehefa vita pirinty izy dia aza miresaka momba ny fanovana azy farafahakeliny herintaona na mahery. Hadino izany. Ny tranokala dia maimaim-poana sy averimberina. Eny, tsy tena afaka. Saingy ny teknolojia dia ahafahana mitazona ity fitaovana marketing ity ho beta maharitra mandrakizay, tsy hatahotra ny hamerina azy io intsony.
Ny traikefa ianarana amin'ny fandefasana ny tranokalanao voalohany dia tsy azo soloina. Saingy, noho io antony io indrindra ny tranokalanao, raiso II, no ho tranokala izay tena mahasamihafa azy. Ny 3, 4, ary ny 5 vao afaka mihatsara. Saingy tsy maintsy– TSY MAINTSY – mamaky ny fizotran'ny fandraisana I alohan'ny ahatongavanao amin'ilay dingana tadiavinao. Vonona, afo, kendrena. Ary avy eo, mikendry hatrany hatrany.
Taratasy John Malala no tsara, Google!
Bit Bit Blue Bit
Oct 27, 2010 amin'ny 9: 57 AM
Tiako ny tetikadin'i Jeb! Amin'ny maha-mpamorona lozisialy ahy dia hitako fa fomba iray tsara hampihenana ireo mpanjifa maniry hanangana vokatra rindrambaiko vaovao: efa nanao iray ve izy ireo teo aloha?
Izaho dia miasa tsy miankina amin'ny fifandraisana maharitra. Izay no antony tiako hiasana amin'ny tranonkala, mivoatra sy mihatsara hatrany ny rindrambaiko. Nihatsara ny rindrambaiko rehefa nitombo ny fifandraisanay (ny ahy sy ny mpanjifako).
27 Okt 2010 amin'ny 8:01 PM
“Miasa ve ny tranonkalanao?” Niady hevitra aho fa ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mahalala ny tena dikan'ny hoe "miasa". Izany no mahatonga antsika tsy ao anaty orinasan-tranonkala fa ao anaty orinasam-barotra anatiny. Tsy manangana tranokala ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa izahay… izay sisa tsara indrindra ho an'ny olona toa an'i Jeb… fa raha tranokala no lalana manelanelana ny vina sy ny mpanjifanay dia alainay antoka fa vita ny lalana ary vonona ny handeha!
“Miasa ve ny tranonkalanao?” Niady hevitra aho fa ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mahalala ny tena dikan'ny hoe "miasa". Izany no mahatonga antsika tsy ao anaty orinasan-tranonkala fa ao anaty orinasam-barotra anatiny. Tsy manangana tranokala ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa izahay… izay sisa tsara indrindra ho an'ny olona toa an'i Jeb… fa raha tranokala no lalana manelanelana ny vinavina sy ny mpanjifanay dia alainay antoka fa vita ny lalana ary vonona ny handeha!
5 Nov 2010 tamin'ny 4:46 PM
Marina izany! Ny fanandramanao voalohany dia saika ho ratsy.
Fred Brooks, mpanoratra ao amin'ny The Mythical Man-Month, dia nilaza hoe: “Mikasa ny hanary iray. Na izany na tsy izany. ”